> Resource > iPad > Sidee soo celinta iPad ka dib markii jailbreak
Sidee baan ku soo celin karaa iPad ka dib markii isku day fashilmay on jailbreaking?
Saaxiib ah anigaa isku dayeen in ay iga caawiyaan JAILBREAK iPad, laakiin waxa uu ku guuldareystay, iyo haatan oo dhan aan sawiro, xiriirada iyo qoraalada ku waayay! Sidee baan u eegista soo celin kaga imaanayo Lugood ?? Ma doonayo inaan wax walba si aad u cusboonaysiiso on my iPad. Qof kasta oo pls caawiyo, Waxaad ku mahadsan tahay!
Mar kasta oo aad isku daydo in aad JAILBREAK iPad ama iDevices kale, ha xasuuso inaad dib aad iPad ka hor. No arrinta aad ku guulaysatay ama ku guuldareystay, wuxuu kaa badbaaadin karaa asalka xogta iPad. Lugood gurmad file ma ogola in aad ku eegaan ama eegista celin xogta ka gurmad Lugood, laakiin taas macnaheedu ma aha ma aad samayn karto si kale. Iyada oo ah qalab dhinac saddexaad, oo aad si fudud u soo saaro karaan gurmad ah oo xamili keligaa.
Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Windows) waa nooc ka mid ah qalabka. Waxaad isticmaali kartaa inuu soo saaro dhammaan waxyaabaha aad iPad gurmad file in ay ku eegaan iyo eegista soo kabsado kuwa aad rabto in 2 tallaabooyinka. Haddii aad aqrinayo dhibaato la mid ah ka dib markii jailbreaking aad iPad, waxa ay noqon doorasho weyn aad u doonaa.
Fiiro Gaar ah: Waxaa intaa dheer, Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows & Mac) ayaa sidoo kale kuu ogolaanaya in aad si toos ah iskaan ceshan xogta oo dhan iPads aan gurmad file.
Download version maxkamad free of this iPad software soo celinta hoose si aad u leeyihiin isku day ah.
Talaabooyinka soo celinta iPad ka dib markii JAILBREAK
Ka hor inta qabanayaan iPad soo celin, ma hagaagsan aad iPad la Lugood, ka fogaanaya la xariirta gurmad ah oo keenaya xogta aad weligiis laga badiyay. Next, ha u fuliyaan dib u soo kabashada la Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) si faahfaahsan.
Tallaabada 1. Ka dooro iPad ee gurmad in iskaan
Orod barnaamijka aad Mac ka dib markii ay ku rakibidda, oo waxaad heli doontaa suuqa kala aasaasiga ah si ay u bilaabaan iPad soo celiyo ka dib markii JAILBREAK. Waxaad inaan ka soo kabsado Lugood hab gurmad file. Waxaa lagu soo bandhigi doonaa oo dhan Lugood gurmad file. Raadi gurmad aad iPad, waxa ay doortaan iyo riix Start Scan ugu dhankiisii ​​midig iyo Macdan content waxaa ka mid ah.
Tallaabada 2. ka JAILBREAK Soo Celinta iPad
Marka scan ka baxayo, dhammaan faahfaahinta gurmad waxaa lagu soo saaro oo soo bandhigay qaybaha. Waxaad ku eegaan karo oo u fiirsada kuwa aad rabto inaad iyaga oo dhan soo kabsadaan ka mid ah.
Sidoo Tallaabada 3. Do gurmad
Si looga fogaado badiyay xogta on your iPad, ha xasuuso inaad si joogto ah dib u up on your computer.
Haddii aad tahay qof user Windows ah, u isticmaalaan Wondershare Dr.Fone ee macruufka iyo qabtaan tallaabooyinka la mid ah dib u soo ceshano xogta iPad aad, ama waxaad isticmaali kartaa barnaamijka si toos ah baarista iPad iyo kabsado xogta ka aad marka aanad lahayn gurmad ah.